तपाई मंगल ग्रहमा आफ्नो नाम पठाउन चाहनु हुन्छ?, नाम दर्ता गरिहाल्नुस्। - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एजेन्सी । अमेरिका स्थित अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र नासाले एक सुचना जारी गरेको छ । नासाले ‘मार्स २०२० रोभर’ मा मंगल ग्रहमा आफ्नो नाम पठाउन चाहनेहरुका लागि नाम पठाउन सूचना जारी गरेको हो ।
तपाई मंगल ग्रहमा नाम पठाउन चाहनु हुन्छ? यदि पठाउने चाहनु हुन्छ भने जारी सूचनामा गएर नाम दर्ता गरिहाल्नुस्।मंगल ग्रहमा पठाउनका लागि नाम दर्ता गरेकाहरुले बोर्डिङ पाससमेत पाउनेछन्। इच्छुकले सेप्टेम्बर ३० सम्म नाम दर्ता गराएर बोर्डिङ पास लिन सक्नेछन्।
दर्ता भएकाहरुले ‘फ्रिक्वेन्ट फ्लायर’ अंक प्राप्त गर्न सक्छन्। २० लाख जनाको नाम मंगल ग्रहमा पठाउने योजना नासाको छ। यो समाचार तयार पर्दासम्म २ लाख ८३ एक सय ७४ जनाले आफ्नो नाम दर्ता गरिसकेका छन्। प्रत्येक नामले ३ करोड फ्रिक्वेन्ट फ्लायर माइल तय गर्नेछ।
प्रक्षेपण र अवतरण:
झन्डै एक हजार किलो(२,३०० पाउण्ड)को ‘मार्स २०२० रोभर’ नामक अन्तरिक्षायान २०२० को जुलाईमा प्रक्षेपण गर्ने योजना रहेको छ। उक्त रकेट मंगल ग्रहमा भने २०२१ को फेब्रुअरीमा अवतरण गर्ने बताइएको छ।
उक्त् रोभरले रातो ग्रहको पुरातन जैविक जीवन, मौसम, भूगोल संकलन गरेर पृथ्वीमा पठाउनेछ, जसले मानव जाति उक्त ग्रहमा बस्न योग्य भएको नभएको थप पुस्टि गर्ने नासाले बताएको छ ।
ऐतिहासिक मार्स मिसन प्रक्षेपण गर्ने तयारी:
नासाको साइन्स मिसन डाइरेक्टोरेटका सहायक व्यवस्थापक थोमस जुर्बुक्षेनले मंगल ग्रहबारे अध्ययन गर्न नासा तयार रहेको उल्लेख गर्दै भने,’हामी ऐतिहासिक मार्स मिसन प्रक्षेपण गर्ने तयारीमा छौं। हामी यो यात्राको खुशी सबैसँग बाँड्न चाहन्छौं।’
नासाले ‘मार्स २०२० रोभर’ मिसनको सुचना जारि किन गर्यो ?
चन्द्रमादेखि मंगल ग्रहको यात्रा तय गर्ने क्रममा जनसहभागिता बढाउने अभियान अन्तर्गत मार्स मिसनकोबारे मानिसहरुलाई जानकारी दिन यस्तो अवसर ल्याइएको नासाले जनाएको छ।
नासाले मार्स २०२० र अरु मिसनहरुबाट मंगल ग्रहमा मानिसहरु अन्वेषण गर्न प्रयास शुरु गरेको समेत जनाएको छ।